Ungazihlela njani izihloko kwiTelegram | I-Androidsis
Umnxeba uye waba yenye yezona zicelo zemiyalezo zaziwayo kwihlabathi liphela. Icacile ngokukodwa kubucala bayo nakukhuseleko, kodwa nakwimisebenzi emininzi ebibandakanya ixesha elingaphezulu, ukongeza kukhetho lokwenza ngokwezifiso olunikezelayo. Phakathi kwemisebenzi esele ifikile zi-bots, enokunika umdlalo omninzi, okanye imixholo onokuyenza.
Emva koko siya ku bonisa indlela esinokuhlela ngayo izihloko kwiTelegram. Ke siya kuba nakho ukuhlengahlengisa imiba yale mixholo ngendlela elula kwisicelo, kwaye ngaloo ndlela senze umxholo kuthi ukuthanda kwethu. Enye yeendlela ezininzi ulwenziwo lweapp.
Kwakusekuqaleni konyaka ophelileyo xa Ukukwazi ukwenza ngokwezifiso okanye ukuhlela imixholo kuze nokusetyenziswa. Ukusukela ngoko, abasebenzisi abaninzi basebenzise eli nqaku. Nangona bebaninzi abanye abangayaziyo indlela le miba ehlelwe ngayo. Siza kukucacisela yonke into apha ngezantsi.
Hlela izihloko kwiTelegram
Okokuqala, nje ukuba sivule iTelegram kwifowuni yethu ye-Android, Kuya kufuneka siye kuseto olufanayo. Ukwenza oku, sicofa kwimigca emithathu ethe tye ebonakala kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwaye kuluhlu oluvelayo, sijonga icandelo leseto. Ngaphakathi kuseto kufuneka ucofe icandelo lesihloko. Apho siya kuba nakho ukuhlela le siyifunayo, nangona sinokutshintsha umxholo osele ukhona.
Ukwenza oku, ingcebiso kukuba ungene kwiqela lezihloko zeTelegram. Sinenani elikhulu lemixholo ekhoyo, ukuze sikwazi ukuguqula imiba yesihloko esele ikhona. Kungenxa yokuba iyaqala ukwenzeka le nto, ukuhlela umxholo kwasekuqaleni kunzima. Sifumana umxholo emva koko, kwaye sinokuwuhlela.
Masibone ke ukuba iqhosha lokudada liphuma nephalethi yepeyinti. Xa sicofa kuyo, uluhlu lwemiyalelo luya kuvela kwiscreen, nekuya kuthi sikwazi ukuhlela ukuhlela isicelo ngokwaso. Le yimiyalelo ethile kwimenyu nganye okanye kwinxalenye yesicelo. Uyabona ukuba umhleli akalulanga kwaphela, kodwa ukuba siyazi ngakumbi ukuba isebenza njani, siya kuba nakho ukuhamba ngokulula.
Uya kubona ukuba xa ukhetha umyalelo, umhleli uya kusivumela ukuba sihlele owona mbala ngokwamanani. Eyokuqala ibomvu, okwesibini iluhlaza, okwesithathu luhlaza okwesibhakabhaka. Ngelixa inani lesine kukungafihlisi esifuna ukukwenza, okusuka ku-0 kuye ku-255, ukumisela ubungakanani bemibala esiza kuyisebenzisa kwesi sihloko kwiTelegram.
Iibhola ezisecaleni ziyasivumela ukuba sihlele ukubonakala kunye nokucaca kombala. Singawusebenzisa umbala webhola ukuze siwufumane, kodwa ukuba kukho ithoni ethile esiyithandayo, kungcono ukuba sibhale ikhowudi yayo, ukuze siyisebenzise kamva ngaphandle kokuyikhangela, ngenisa ngokulula ngekhibhodi. Yintoni eya kwenza inkqubo yokuhlela ngokukhawuleza okukhulu.
Ingxaki eqhelekileyo kule meko, kukuba singazi ukuba yeyiphi na inqaku lomxholo esiyihlelayo kwisicelo. Ngethamsanqa, kulula ukuyibona, enkosi ngobuqhetseba obulula. Into ekufuneka siyenzile kukuhambisa umbala kwiqamza lombala ngokukhawuleza okukhulu. Ngale ndlela, isikrini siba selubala, esivumela ukuba sibone ukuba yeyiphi na isihloko esiyihlelayo. Nokuba ibhar, okanye umbala ongasemva, njl.
Xa senze uhlengahlengiso esifuna ukulwenza, Kufuneka nje ucofe ekugcineni isihloko. Ngale ndlela, sihlele isihloko kwiTelegram. Ukuba sifuna, sinokukhetha njengomxholo ongagqibekanga esiya kuwusebenzisa kwisicelo. Ukuhlela umxholo kwi-app akukho nzima, nangona uninzi lwemiba kufuneka ithathelwe ingqalelo kule nkqubo. Wakhe wayilungisa ingoma?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uzihlela njani izihloko kwiTelegram